Malagasy tavela any Inde: Nisy namoy ny ainy niandry ny fahafahany mody aty Madagasikara
vendredi, 24 juillet 2020 21:25
Mitalaho, miantso vonjy izy ireo, nanoratra tany amin’ny masoivoho malagasy any Inde sy tamin’ny filohan’ny Repoblika ihany koa, mampahafantatra ny zava-misy iainan’izy ireo any Inde, sy miangavy vahaolana hahafahan’izy ireo miverina an-tanindrazana, toy ireo mpiray tanindrazana efa afaka niditra an’i Madagasikara, efa in-telo miantoana taorian’ny volana martsa 2020, dia ireo avy any Koweit, Maorisy ary ny andiany avy amin’ny firenena samihafa tonga tamin’ny fiaramanidin’ny Ethiopian Airlines.
Maro no lany vatsy, tsy nanampo ny ho tavela maharitra any Inde noho ny fitsaboan-tena natao tany. Saika aretin’ny voa ny ankamaroany, ka natao grefy ary mbola marefo ara-pahasalamana. Voaroaka tamin’ny trano nitoerany ny sasany. Farany teo aza dia fantatra fa nisy iray namoy ny ainy, teo ampiandrasana ny fotoana ahafahana mody aty Madagasikara.
Araka ny fantatra dia efa vonona ny fiaramanidina hitondra azy ireo fa miandry fotsiny ny fankatoavana avy amin’ny fanjakana ny hahafahan’ireo teratany Malagasy ireo miditra eto Madagasikara.
Hiantoka ny saran’ny fodiany izy ireo ary milaza fa vonona ny hanaja ny fepetra ara-pahasalamana amin’ny fihibohana vao tonga eto Madagasikara, ary hanefa ny sazy raha mandika ny fepetra mifanaraka amin’izany izy ireo.